Lee Seo-yeon က Im Yoona ငယ် ဘဝကိုသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
Eun San (Im Yoona) ဟာ မြို့မျက်နှာဖုံး မြို့မှာအချမ်းသာဆုံး သူဌေးကြီးရဲ့ သမီးဖြစ်ပြီး သူမအလှဟာ ကဗျာဆန်ပြီး မြင်သူတကာငေးလောက်အောင် ချောမောလှပသူဖြစ်ပါတယ်(ခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်တော့ သူမအလှက ရူးလောက်အောင် သေလောက်အောင်လှတယ်ပေါ့ကွယ်)
Si Won ရဲ့ ငယ်ဘဝကလေးလေးက အခုလက်တလော MBC ကလာနေတဲ့ Bad Thief,Good Thief မှာပါတဲ့ကလေးလေးပါ
Wang Won (Im Si Won) ဟာ ရုပ်ရည်ချောမောပြီး အပြောကောင်းတဲ့ အိမ်ရှေ့မင်းသားလေးဖြစ်ပြီး သူရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေ နဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ဖုံးကွယ်ပြီးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်
Hong Jong Hyunရဲ့ ငယ်ဘဝသရုပ်ဆောင် ကလေးလေးက 2015 MAMA ကားမှာ Hong Jong Hyun ရဲ့ ချစ်သူ Song Yoon Ah ရဲ့ သား Park Seo Joon ငယ်ဘဝနေရာက သရုပ်ဆောင်တဲ့ ကလေးလေးပါ
Wang Lim(Hong Jong Hyun) ကတော့ Won ရဲ့ ငယ်သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ် သက်တော့စောင့်လည်း ဖြစ်ပြီး သူဟာ
ရိုးသားဖြောင့်မတ်ပြီး စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်(Moonlover နဲ့ ပြောင်းပြန်လေးပေါ့ )
Wang Dan (Park Hwan Hee) ကလည်း Won,Eun နဲ့ Lim တိုပြီးရင် သူမဟာ လည်း ဒုတိယအဓိကသရုပ်ဆောင်လို့ပြောလို့ရပါတယ် သူမကိုတော့သိမယ်တင်ပါတယ် DOTSမှာတုနိးက နပ်စ်မလေး ,Jealousy Incarnate မှာ တုန်း က CEO နဲ့ သဘောတူထားတဲ့ အစီအစဉ်တင်ဆက်သူလေးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်
Supporting Cast တွေကလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေ​ကြီးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကားလေးပါ
Review By HKH
Translator: HKH & Sandar Lwin
Episode3(Openload Link )
Episode4(Openload Link )
Episode 12 (Openload Link)
Episode. 13 (Openload link)
Episode. 14(Openload link)
Episode 15 (Openload link )
Episode 16 (Openload link )
Episode 17 (openload link)
Episode 18 (Openload link)
Episode 19 (Openload link)
Episode 20 (Openload link)
Phyo Phyo July 20, 2017 at 3:41 AM
k July 28, 2017 at 9:24 PM
aung ko September 4, 2017 at 10:07 PM